राजपालाई ओलीको चेतावनी- एमालेले प्रतिवादको बाटो समाउनु नपरोस् | Ekhabar Nepal
राजनीति भाद्र १४ २०७४ .
काठमाडौं, भदौ १४ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निषेधको राजनीति त्याग्न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई सचेत गराएका छन् ।
अब म उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, उहाँहरुले निषेधको राजनीति जे गरिरहनुभएको छ, नेकपा एमाले लगातार त्यसैगरी ओर्लियो भने उहाँहरुको हालत के हुन्छ । तर यसको अर्थ यो होइन एमाले उहाँहरुकै जसरी निस्किन्छ । एमाले एउटा जिम्मेवार पार्टी हो । यसले देशको जुनसुकै भागमा पनि गएर कार्यक्रम गर्न सक्छ । हिजो पनि जनकपुरमा उहाँहरुले व्यवधान गर्नुभयो । आक्रमण गर्नुभयो, भाड्न खोज्नुभयो । त्यहाँ हिंसात्मक गतिविधि गराउनुभयो उहाँहरुले । ढुंगामुढा भनेको कुनै शान्तिपूर्ण गतिविधि होइन्, उच्छृङखल गतिविधि हो । तर पनि नेकपा एमालेले कार्यक्रम गर्यो, गर्छ एमाले कुनै आवेश, उत्तेजनामा पनि आउँदैन् । भागेर पनि जाँदैन् । त्यति हो हामीले, एमालेले प्रतिवादको बाटो समाउनुनपरोस भन्ने हामी चाहन्छौं ।
हामी राजपालाई भन्न चाहन्छौं– उहाँहरु पहिले संविधान मान्दिन भन्नुहुन्छ, कहिले आफैसमेत प्रक्रियामा, निर्माणमा पनि उहाँहरु सरिक हुनुहुन्छ । सहि गर्न उहाँहरु पटक पटक संशोधनमा आइसक्नुभयो । उहाहरुका संशोधन पनि परे । गरिमामय संसदले त्यसको निर्णय लियो, उहाँहरु सरि भएर प्रक्रियामा गइसकेपछि अब मान्दिन भन्ने जस्ता खालका कुराहरु, निर्वाचन भाग लिन्न जस्ता कुराहरु, कहिले कसलाई प्रवेश गर्नदिन्न जस्ता असंवैधानिक, गैरकानूनी कुराहरु, निषेधात्मक र उच्छृङ्खल कुराहरु हुन् । यस्तो कुराहरु उपयुक्त हुँदैन् । उहाँहरुलाई राजनीति गर्नुछैन्, अरुनै एउटा समूहमा बन्धक हुनुछ भने मलाई केही भन्नु छैन् ।
मेरो आग्रह के छ भने र नेकपा एमाले उहाँहरुलाई के भन्छ भने तपाईहरु राजनीति गर्ने पार्टीहरुको हो भने राजनीतिक पार्टी हो भने राजनीतिक आँचरणमा, अभ्यासमा, व्यवहारमा, निषेधको राजनीति, हमलाको राजनीति, अवरोध र व्यवधानको राजनीति, शारीरिक आक्रमणको राजनीति, तोडफोड, हिंसा र आजगनीको राजनीति, यसप्रकारको सभ्य समाजले स्वीकार गर्न नसक्ने, अस्वीकृत व्यवहारहरु प्रदर्शन नगर्नुस् । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आउनुस् ।
अब म सरकारलाई भन्न चाहन्छु । राजपालाई के भनिरहेको छ । यसो गर्नुहुँदैन्, कानून विपरित हुन्छ कि तपाईहरु हामी कानून विपरित भयो भनेझैं भन्छ कि तपाईहरु गर्दै जानुस् । के गर्छ सरकारको भुमिका के हो ?
अर्काे निर्वाचन आयोगलाई पनि म सोध्न चाहन्छु– यो निर्वाचन आचारसंहिता भित्र पर्छ कि पर्दैन् । उहाँहरुले जारी गरेको आचारसंहितामा कालोझण्डा देखाउन नपाइने, ढुंगामुडा गर्न नपाइने, अर्काको कार्यक्रम विथोल्न नपाइने भित्र पर्छ कि पर्दैन् । उहाँहरुले त राजपालाई आग्रहसम्म गरेको, ध्यानाकर्षण गरेको, यसो नगर्नुस् भन्ने सम्म गरेकोजस्तो पनि मैले सुनेको छैन् । अनि निर्वाचन आयोगले उहाँहरुलाई केही भन्न नसक्ने कारण के रहेछ ? निर्वाचनमा राजनीतिक दल सहभागी हुने हो । राजनीतिक दलहरु संविधानसम्मत कानूनी ढंगले सहभागी हुन्छन् । निर्वाचनमा सहभागी हुन्छु भनेर फेरि गैरकानूनी क्रियाकलाप त्यसनाउँमा पनि केही पनि हुँदै भन्ने कुरा स्वीकार्य छैन् ।